Dhaqaaleynta caalamiga ah: waa maxay, waa maxay faa iidooyinka iyo qasaaraha ay leedahay | Dhaqaalaha
Encarni Arcoya | 30/05/2021 12:16 | Siyaasadda dhaqaalaha
Mid ka mid ah fikradaha sida ugu dhawaaqa sanadaha yar arrinta dhaqaale waa waxa loogu yeero "globalisation dhaqaale". Ereygan oo aan aad u adagayn in la fahmo, waxaa ku jira mid ka mid ah aqoonta ugu muhiimsan ee dhaqaalaha.
Laakiin, Waa maxay caalamiyeynta dhaqaale? Waa maxay faa iidooyinka iyo qasaaraha ay leedahay? Maxaa loogu talagalay
1 Waa maxay caalamiyeynta dhaqaalaha
1.1 Maxaa lagu gartaa caalamiyeynta dhaqaale
2 Faa’iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka dhaqaaleynta adduunka
2.1 Faa’iidooyinka ay leedahay dhaqaalaha adduunka
3 Marka caalamiyeynimadu ma wanaagsan tahay mise waa xun tahay?
Waa maxay caalamiyeynta dhaqaalaha
Waxaan u qeexi karnaa caalamiyeynta dhaqaale sida Isdhexgalka dhaqaale iyo ganacsi ee ka dhaca wadamo dhowr ah, heer qaran, heer gobol ama xitaa heer caalami ah, ujeedadooduna tahay in laga faa’iideysto badeecadaha iyo adeegyada dal kasta. Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadlaynaa awoodda waddamadu u leeyihiin inay isku darsadaan alaabtooda iyo adeegyadooda isla markaana ay dejiyaan siyaasado dhaqaale iyo ganacsi oo dhex mara dalalkaas ay ka kooban yihiin.
Sidan oo kale, a koritaanka ugu sarreeya ee dhammaan waddammada, laakiin sidoo kale dhinacyo badan oo badan sida farsamada, isgaarsiinta, iwm.
Maxaa lagu gartaa caalamiyeynta dhaqaale
In kasta oo fikraddu horey u caddeysay waxa aan ula jeedno caalamiyeynta dhaqaale, haddana waa run inay jiraan astaamo lagu xisaabtamo ereygan. Waana taas:
Ayaa xukuma iyada oo ku saleysan heshiisyo la maareeyey lana dhex dhigay waddamo ku heshiiya in la isku daro hantidooda iyo kheyraadkooda, saxeexid iyo dhaqan gelin. Kuwani waa dukumiintiyo ganacsi oo bilaash ah, ama xirmooyin dhaqaale, kuwaas oo mas'uul ka ah xakamaynta shaqada wanaagsan ee waddamada.
Se wuxuu dhiirigelinayaa shaqo abuurka, iyo sidoo kale dhaqaalaha wadamada ku lugta leh. Dareenkan, xaqiiqda ah in la helo shaqaale tayo leh, xitaa haddii aysan isku wadan ahayn, waxay caawineysaa horumar dheeraad ah.
ka badeecadaha iyo adeegyadu waa la soo dejiyaa oo la dhoofinayaa. Taasi waa, badeecadahaas oo waddan uusan lahayn, laakiin mid kale uu haysto, laga yaabo inay leeyihiin xorriyad weyn oo ay ku soo dhoofsadaan, isla mar ahaantaana, waxay haystaan ​​oo ay si siman danaha waddammada kale u leeyihiin.
Globalisation dhaqaale waa ficil ahaan adduunka oo dhan. Laakiin marwalba waxaa lagu heshiiyey heshiisyo kala duwan (sida ku xusan wadamada saxiixa).
Faa’iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka dhaqaaleynta adduunka
Waqtigan xaadirka ah ee maqaalka, waxay u badan tahay inaad horey u haysatay fikrad ah inay fiicantahay iyo inay xun tahay in caalamiyeyn dhaqaale ay jirto. Runtuna waa in, sida wax walba ku jirta, ay leedahay waxyaabo fiican iyo wax xunba. Sababtaas awgeed, markii la saxiixayo heshiisyada, waddammadu waxay u muuqdaan inay aad u falanqeeyaan inay u fiican tahay dalka iyo in kale.
Faa’iidooyinka ay leedahay dhaqaalaha adduunka
Waxyaabaha wanaagsan ee aan kugu magacaabi karno ee ku saabsan caalamiyeynta dhaqaalaha, waxaan haynaa:
Qiimaha waxsoosaarka warshadaha ayaa dhaca. Sababtoo ah waxaa jira xiriir ka dhexeeya waddamada, qiimaha wax soo saarka ayaa u muuqda mid ka raqiisan, u oggolaanaya wax soo saarka warshadaha in uu ka raqiisan yahay Tani waxay sidoo kale saameyneysaa sicirka ugu dambeeya ee badeecadaha, si badeecadaha iyo adeegyada loogu bixiyo qiimo tartan badan.
Kordhi shaqada. Gaar ahaan waddamada u baahan shaqaale, laakiin sidoo kale kuwa kordhiya soo dejintooda iyo dhoofintooda, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin shaqaale si ay shaqada lafteeda u qabtaan.
Waxaa jira tartan u dhexeeya shirkadaha. Tan waxaa loola dhaqmi karaa sida wax fiican, laakiin sidoo kale sidii wax xun. Taasina waa tartanka u dhexeeya shirkadaha had iyo jeer waa wax fiican, sababtoo ah waxay kordhin doontaa wax soo saarka, dhiirrigelinaysaa hal-abuurka iyaga oo isku dayaya inay bixiyaan alaab iyo adeegyo ka wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, sidoo kale way ku xumaan kartaa dareenka ah in tartan badan ay ku adag tahay ganacsiyada yaryar inay la tartamaan kuwa waaweyn.
Si dhakhso leh marka wax loo soo saarayo, wax walba ka sarreeya maxaa yeelay dhammaan teknoolojiyada iyo hal-abuurnimada waxaa la geliyaa adeegga waddammada oo dhan, tanna, waxaa suurtagal ah in la tayeeyo tiknoolajiyada oo qof walba laga dhigo inuu u socdo isla jiho, marka lagu daro kor u qaadista horumarka adduunka.
Laakiin wax walbaa ma wanaagsana, waxaa jira waxyaabo badan oo taban oo caalamiyeynta dhaqaale ay noo keento, sida:
Sinnaan la’aan dhaqaale. In kasta oo aan soo sheegnay in dalalku ay doorkooda ka shaqeeyaan si badeecadaha iyo adeegyadu ay uga wada ganacsadaan dhammaan dadka, haddana waxaa iska cad in dhaqaalaha shaqsiyeed ee waddan kasta uu saameyn ku yeesho horumarka, iyadoo ay jirto kala duwanaansho u dhexeeya mid dhaqaale iyo mid kale.
Deegaanka ayaa saameyn ku yeeshay. Si ka weyn ama ka yar. Tani waa sababta oo ah, wax soo saar aad u weyn, waxaa sidoo kale jiri doona faddarayn ka weyn, waana taas sababta ay muhiim u tahay in la dejiyo siyaasado lagu daryeelayo deegaanka.
Shaqo la’aan badan. Haa, way iska hor imaaneysaa marka loo eego wixii aan horay u soo sheegnay, in shaqo badan la abuuray. Dhibaatadu waxay tahay, maadaama ay jiraan tiro aad u badan oo shaqaale ah, shirkaduhu waxay u muuqdaan inay heli doonaan shaqaalahaas ka dhaqaalaha badan, isla sidaas oo kale ayay ku dhici doonaan shaqaalaha. Waa maxay tan macnaheedu? Hagaag, waxaa jiri doona shaqo la’aan badan wadamada ay ku badan yihiin shaqaalaha.
Horumar yar. Adoo yareynaya fursadaha ganacsiga (wixii aan kaaga sheegnay tartan ganacsi) oo si taban u saameeya dhaqaalaha shaqsi ee dalka.
Marka caalamiyeynimadu ma wanaagsan tahay mise waa xun tahay?
Waxay kuxirantahay wadanka aad weydiiso, waxay kuu sheegi doontaa hal shay ama mid kale. Sidaad aragtay, waxay leedahay waxyaabo wanaagsan oo aan fiicnayn, taasina waxay saameyn ku yeelanaysaa waddanka shaqsi ahaan, iyadoo laga dhigayo mid taajir ah ama ka yar.
Laakiin si aan waxyeello u soo gaarin, waxaa jira heshiisyo ganacsi. Kuwaani waxaa loo kala saxeexaa si laba-geesood ah, haddii ay u dhexeeyaan laba waddan; ama dhinacyo badan haddii ay ku jiraan dhowr waddan. Waxayna dejinayaan maxay yihiin tilmaamaha la raacayo. Waddan kasta waa inuu qiimeeyaa dukumintigaan ka hor inta uusan saxiixin si uu awood ugu yeesho inuu ogaado inuu yahay waxa iyaga ku habboon ama, haddii kale, waxaa ugu wanaagsan in sidii hore loo sii wado.
Ikhtiyaar kale oo la adeegsaday ayaa ah isticmaal baloogyo dhaqaale, taasi waa, qawaaniin laga dhex wado dhowr waddan si loo dejiyo shuruudaha la xiriira dhinacyada qaarkood: canshuuraha, badeecadaha dibadda laga keeno, iwm.
Dhaqaaleynta caalamiga ah waxay sidoo kale ku dhici kartaa si kali kali ah, isla wadankii, tusaale ahaan iyadoo la nidaaminayo sicirka tacriifada, shuruudaha soo dejinta ama dhoofinta alaabada, iwm. Marka, dhaqaalaha dalka sidoo kale waa la saameeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Siyaasadda dhaqaalaha » Globalisation dhaqaale
Suuqa Suuqa Shiinaha
Waa maxay haynta